TETIKASA FAMOKARANA SARIMIAINA MALAGASY · L'Homme, son aura et son évolution
> TETIKASA FAMOKARANA SARIMIAINA MALAGASY
Classé dans : — cyrius @ 11:48
Afaka miara-miasa isika.
Ordinateur iray connecté sy fakantsary na finday azo akana sary sy clé iray dia azo anombohana ny tetikasa.
Jereo ny ampahany amin’ny asa vitako. ato [url=http://cyrius.unblog.fr/?p=1562]mes projets bandes dessinées[/url]
[url=http://cyrius.unblog.fr/?p=1562]mes projets bandes dessinées[/url].
Ity fomba miala amin’ny mahazatra ity no tsy mandany vola indrindra, nefa mamokatra haingana.
Tsy misy teknika mampamokatra sarimiaingana haingana toy ny ahy aloha hatreto.
Fantaro fa mandaby 4000 euros eo ho eo ny mamokatra sarimiaina 1 mn ho an’ny vahiny.
Tsy mandany 300 euro kosa ny sarimiaina 90 mn amin’ity fomba fiasako ity, raha sary fotsiny no resahina
Handroso haingana sa hitsapatsapa any an-kafa ?
Malagasy aho, fa voafehiko kosa raha ity kolontsaina vahiny iray ity.
Ny hoenti-manana ara-bola sy ara-pitaovana no tsy ampy, mampandringa ny famokarako sarimiaina vita malagasy.
Afaka miara-miasa amiko koa ianao mpamokatra dokam-barotra.
Nianatra momba ny PAO ny tenako, ary efa niasa teo amin’ny fikirakirana sary.
Nanao fikarohana sy nanitatra koa nefa, ary manampy ahy amin’izany ny fahafehezako zava-kanto hafa sy ny fivelarako ara-kolontsaina ary ny fahafehezako « logiesl » sy « application » fikirakirana sary mihetsika sy tsy mihetsika maro.
Averiko eto indray ity pejy ity hodinihinao.
[url=http://cyrius.unblog.fr/?p=1562]mes projets bandes dessinées[/url]